Vatori veNhau Vokurudzirwa Kunyora Nyaya dzeBudiriro
Hurumende inoti vatori venhau vane basa zvakanyanya mukuzadzisa chishuviro chehurumende chebudiriro pamwe nekuona kuti nyika inenge yabuda muhurombo panosvika gore ra2030.
Vachitaura kumhemberero yebepanhau reDaily News rekusvitsa makore gumi mushure mekumbovharwa, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa, vati vatori venhau vanofanirwa kubatsira hurumende mukuona kuti nyika yabudirira huye kubatana.
Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa inokoshesa zvakanyanya kushanda kwevatori venhau zvakasununguka.
Vatiwo segurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vari kuedza nepese pavanogona kuti vatori venhau vawaniswe ruzivo rwezvavanenge vachida pakupepeta nhau pamwe nekuti vashande zvakasununguka.
Mukuru wesangano rinoona nezvemashandiro evatori venhau reVoluntary Media Council of Zimbabwe kana kuti VMCZ, VaLoughty Dube, vakurudzirawo vatori venhau kuti vashande vachitevedzera zvinotarisirwa kubva kuvatori venhau. VaDube vatsigirawo mashoko aAmai Mutsvangwa vachiti vatori venhau vane basa guru rekusimudzira budiriro munyika.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimiririra rePlatform for Youth Development, VaOwen Dhliwayo, vati vatori venhau vanonyora nekutepfenyura zviri kuitika vakapa chitsvambe kuhurumende kuti ikoshese nyaya dzebudiriro.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine chido chekuti vatori venhau vashande vakasunungukavatori venhau vanogarochema chema nekushungurudzwa vari pabasa.
Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rakabudisagwaro rayo repagore richiti vatori venhau vakashungurudzwa muna 2020 vaive vakwira kusvika pamakumi mashanu nevaviri zvichienzaniswa nemakumi maviri nevanomwe muna 2019.
Musi weChipiri mumwe mutori wenhau webepa repadandemutande re263 Chat anonzi akakuvadzwa nemapurisa ari pabasa.
Bepanhau reDailynews rakambovharwa muna 2003 nehurumende yemushakabvu VaRobert Mugabe ndokuzovhurwa zvakare muna 2011.